रोचक विश्व – Eranimahal
तपाईको यौन जीवनमा धेरै समस्याहरु हुन सक्छन् । हामीले समस्याहरु त्यसै लुकाएर बस्नुभन्दा पनि तीनको समाधान खोज्नु पर्छ । नियमित यौन क्रियाकलापमा सामेल व्यक्ति र सामेल हुन नपाएको व्यक्तिबीचको व्यवहारमा
नियमित यौंन सम्पर्क नहुँदा देखिन सक्ने समस्याहरु !
एजेन्सी- यौन सम्पर्क खासगरी विवाहित दम्पतीको दिनचर्याकै एउटा हिस्सा हो । नव–दम्पतीबीच रातमा कति पटक यौन सम्पर्क स्थापित हुन्छ । जब उमेर ढल्कदै जान्छ वा बैवाहिक जीवन लम्बिदै जान्छ, यौन
पृथ्वीमा आइपुगे अन्तरिक्षबाट १२ बोतल रक्सी !
काठमाडौं – शीर्षक पढ्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्यो होला तर समाचार सत्य हो। अन्तरिक्षबाट वाइनका १२ बोतल पृथ्वीमा आइपुगेका छन्। यी वाइनका बोतल फ्रान्सको उच्चस्तरीय ब्राण्ड बोर्दो रेड वाइनका हुन्। फ्रान्सका
दुनियाँकै महंगाे जेल, एक जना कैदीका लागि कराेडाैँ खर्च !
विभिन्न कसूरमा संलग्न दोषीहरुलाई कैदीका रुपमा राख्ने ठाउँ हो जेल । दुनियाका सबैजसो देशले कानून कार्यान्वयनका लागि जेलको बन्दोबस्त गरेका हुन्छन् । तर कतिपय जेलहरु चाहीँ निकै चर्चित तथा कुख्यात